Momba anay | Shijiazhuang Sincere Chemicals Co., Ltd.
Shijiazhuang Sincere Chemicals Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny taona 2001, Ny vokatra lehibe an'ny orinasa dia: Hexamethylphosorika triamide, Formamide, N, N, N, N'-Tetramethylethylenediamine, Dichlorodiethylether, 4-Methylmorpholine, 3,5-Dimethylpiperdine, 1,2 -diaminobenzene, ABL, sns., Ny vokatra dia aondrana any Eropa, Azia atsimo atsinanana, Korea, Japan, Taiwan ary firenena sy faritra hafa. Ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny fitaovana elektronika, fanafody, fanafody famonoana bibikely, zava-mahadomelina, fandokoana rano, fitaovana syntetika ary sehatra maro hafa.
Hatramin'ny nananganana azy dia nifikitra hatrany tamin'ny foto-kevitry ny fampandrosoana ny "fahamendrehana, fitoniana, fampandrosoana ary fanitsiana" ny orinasa, ary nitazona fiaraha-miasa maharitra na marimaritra iraisana na fananana fananana miaraka amin'ireo ozinina matanjaka ao an-toerana sy andrim-pikarohana faritany mba hiantohana ny fitoniana sy ny vidin'ny kalitaon'ny vokatra. tombony, indrindra Izy io dia ny fiantohana ny fampandrosoana sy ny famokarana vokatra vaovao, ary izao dia namorona orinasa mpamatsy ara-tsiansa simika matihanina siantifika, indostria sy sendika ary ny varotra anatiny sy avy any ivelany.
Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay, nomena ny mari-boninahitra "Integrity Advanced Enterprise Brand" na "Enterprise-efficient Enterprise" navoakan'ny sampana na fikambanana eo amin'ny sehatra nasionaly na faritany maro ny orinasa; noderaina sy natolotr'i Alibaba, Baidu, HC Network ary orinasan-tserasera hafa koa izy io; indrindra Nahazo resadresaka manokana sy dokambarotra an'ny tsanganana "Brand Power" an'ny orinasa CCTV Securities Information Channel.
Ny fahamarinana dia fototry ny fampandrosoana orinasa, ary ny fanavaozana no hery manosika ho an'ny fampandrosoana orinasa. Izahay dia mametraka ny fahamendrehana hatrany amin'ny toerana voalohany, ary izahay no mikendry ny hanome ny mpanjifa vokatra mahafapo. Mino aho fa amin'ny ezaka ataontsika tsy misy fetra, dia azo antoka fa hanao fandrosoana tsy tapaka isika, hahazo ny fahatokisan'ny mpanjifa bebe kokoa, ary hanao ny orinasanay hitombo sy hivoatra hatrany.
Na efa vita mialoha na aorian'ny varotra, hanome anao serivisy tsara indrindra izahay hampahafantatra anao sy hampiasa ny vokatray haingana kokoa.